by Krishna KC | Updated: 14 Sep 2020
संभवत नेपालको इतिहासमा डा गोविन्द केसीले एक्लै बसेको जति अनशन २००७ देखि अहिले सम्म राजनैतिक क्षेत्रमा छैन होला। फेरी पनि जुम्ला पुगेका डा गोविन्द केसी आफ्नो १९ औं अनशन सुरु गरेका छन्।
जिवन साधारण बिताएर नेपालीहरुको स्वास्थ्य सेवामा आफ्नो सारा कमाइ लगाएका डा केसीले हरेक पटक एउटा न एउटा बिषय उठाएका हुन्छन। अनि हरेक पटक नेपाल सरकारका प्रतिनिधिले माग पुरा गर्ने प्रतिबध्दता दिएर उनको अनशन तोड्ने गरेको छ। उनले राखेका र सरकारले बोलेका कुरा के के थिए भनेर जानकारी लिन पनि केहि दिनको अनुसन्धान नै गर्नु पर्ने भएको छ।
सबैलाई थाहा छ चिकित्सा शिक्षामा सुधारको माग राख्दै आएका डा गोविन्द केसीले जुम्लामा १९ औ पटक अनशन शुरु गरेका छन्। सेप्टेम्बर १४, २०२० सोमबार दिउँसो २ बजेदेखि चन्दननाथ नगरपालिकाको बाबिरा मन्दिरमा १९ औं अनशन शुरु गरेका छन्। डा केसीले यो पटक अन्तिम र वारपारको अनशन बसेको बताएका छन्।
यो समयमा आएर राज्यले गर्नुपर्ने कामलाइ एउटा नागरिकले ज्यानको नै जोखिम गर्दै अनशन बस्न पर्नु भनेको नालायाकी पनि नै हो। तर यहाँ प्रश्न यो पनि उठ्छ कि हरेक पार्टीको सरकारले उनको कुरालाइ प्रतिबद्ध गर्दै पुरा भने गर्दैन। यहाँ सम्मकी सबै भन्दा अब्बल मानिएका स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले पनि उनको कुरा पुरा गर्न सकेनन।
यो बिषय टुङ्गोमा किन पुग्दैन ? हजारौंको हत्या गरेको स्वीकार्ने व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुने उसका कुरा मानिने तर एउटा स्वास्थ्यकर्मी जसले सबै त्यागेर नागरिकको सेवामा गएको छ त्यो कुरा किन नटेर्ने ? यो पटक उनले कर्लाली प्रदेशको स्वास्थ्य र स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादनका कुरा उठाएका छन्। तर पनि उनको प्रमुख माग भनेको आफुसँग २०७५ साउन १० गते भएको सम्झौता अनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संसोधन गरिनुपर्ने अनशन सुरु गरेका हुन्। स्मरणीय कुरा, उनको यो अनशन जिम्लामा नै दोश्रो पटक हो।
नेपाली काँग्रेसकाे अन्तर्राष्ट्रिय संगठन जनसम्पर्क समिति क्यानडाले एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै संगठनकाे नाम जाेडेर विभिन्न हर्कत नगर्न निरन्जन थापालाई चेतावनी दिएको छ।
ब्यङग्य कविता:रेल कि झेल ?